Quatuor Squad: seho, hanasoavana ireo tratran’ny «alzheimer» | NewsMada
Quatuor Squad: seho, hanasoavana ireo tratran’ny «alzheimer»
Quatuor Squad, tarika nijoro tsy ela akory izay, saingy efa manana ny maha izy azy, fanta-daza ary miavaka amin’ny fahaizana milalao zavamaneno misy tady. Tsy ho toy ny mahazatra ny fampisehoana hotanterahin’izy ireo, ny tolakandron’ny asabotsy 29 septambra izao eny amin’ny sekoly ISTS eny Mandrimena Andoharanofotsy.
Hoentina indrindra, hanohanana ny asa fiahiana ireo zokiolona tratran’ny aretina « alzheimer » ity hetsika ity. Toy ny isan-taona sy toy ny fahita any amin’ny firenen-tsamihafa, ao anatin’ny federasiona « Alzheimer’s Disease International”, manamarika ny « Iray volana maneran-tany ho an’ny “Alzheimer” » ihany koa ny eto Madagasikara. Isaky ny volana septambra io.
Mandritra izany, marobe ny hetsika, karakarain’ny fikambanana Madagascar Alzheimer, miaraka amin’ny « IRebareba Madagascar », hitadiavana vola, izay tena ilaina amin’ny fandraisana ireo tratran’ity aretina ity. Anisan’izany izao fampisehoana iarahana amin’ny Quatuor Squad izao.
Hanelanelana ny fampisehoana ny fijoroana vavolombelona mikasika ny aretina « alzheimer ». Marihina fa fohy, saingy mafonja io karazam-panentanana io. Maromaro ny tetikasan’ny fikambanana ary hisy ny hotontosaina amin’ny alalan’ny vola azo amin’izao fampisehoana izao. Anisan’izany ny fanatsarana ny trano misy ny foibeny, toerana ihaonana amin’ireo marary sy ireo zokiolona, indroa isan-kerinandro. Eo koa ny famoronana tranonkala na « site web » an’ny fikambanana.